ဂဇက်သတင်း မနက်ခင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » ဂဇက်သတင်း မနက်ခင်း	17
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 23, 2016 in Aha! Jokes, Satire | 17 comments
၂၀၁၆ ဝင်ငွေခွံစောင်သူ အင်ကြင်နီလျှာစာရင်း ထုတ်ပြန်ရာ ဂဇက်ရွာဓါး အူးကျီးမိုက် (ခ) ပါပါမိုက် ရှေ့စုန်းတွင်ရှိကြောင်း ဂုံယူဖွယ် တွေ့ရသည်။
နေပြည်တော်အနီး ရောက်လာသော အလှုပ်သမားသပိတ်တပ်အား ဖြောင်းဖျရန် ထိုင်ဝမ်တွင် ရောက်နေသော ခိုနီဒုံဂျီးအား ဒီချုပ်အစိုးရမှ ဆင့်ခေါ်ရာ အချိန်မှီ ရောက်မလာရွေ့ အလုပ်သမားများ အဖမ်းဆီးခံရကြောင်း ဝမ်းနည်းဖွယ် သိရသည်။
အိုင်အိုင်စီ ကိုယ်စားလှယ် ဂဇက်ရွာအရှင်သခင် အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ် ရန်ကုန်သို့ ရောက်မလာမှီ ဝက်သားဈေး ဆယ်ဆ တက်သွားကြောင်း သိရသည်။ (ဘာမှ မဆိုင်ထင်သူများ ကေးအော့စ် သီအိုရီစာအုပ် လျှာဖတ်ပါ)
ကဗာ့အမြင့်ဆုံး ဧဝရက်တောင်ထိပ်သို့ မြန်ကြံ့နိုင်ငံမှ ရောက်ရှိခဲ့ရာ တောင်တက်သမားမှာ ဂဖဇက်ရွာသူပုရှ် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်ကြံ့ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်း အထက်အဆင့်ဆင့်အား ဂါကြေး လစဉ်ပေးနေရမှု ရပ်ဆိုင်းရန် ရဲချုပ်၏ သတိပေးချက် ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ဂဇက်နယ်ထိန်း ရဲဇုတ်လျှာမြ မော်တော်ကား ဝယ်ထားကြောင်း ခိုင်လုံသော သတင်းရပ်ကွက်မှဆိုသည်။
မြန်တြံ့သမတဦးထင်ကျော် အရပ် မိုးထိမြင့်မား လွန်စွာရှည်သည့်အတွက် မျိုးမစစ် မူဆင်သွေးပါကြောင်း မဘသဒဂါ နေဈင်လက်ဒဘဲ့ မျိုးတားတိုးတက်ရေးပါတီဝံ့ ကိုးခြောက်ကိုး မောင်ပေမှ တင်ပြသည်။
နေမကောင်းသဖြင့် အိတ်ယာထဲ လဲသွားသော ရွာသားကရဲစည်ထံ ရွာသူတစု သတင်းသွားမေးရာ ၄င်းတို့အား မြင်သည်နှင့် ချက်ခြင်းထောင်မတ်လာရာ ကျန်းမာရေး မစိုးရိမ်ရကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
လေပျံစီး ခရီးနှင်လာသော သဂျီးမာမွတ်ခိုင်အား ရွာဓါးကြောင်ကြီးမှ အိုင်အက်စ် အကြမ်းဖက်သမားအသွင် လေယဉ်အပိုင်စီး ဟန်ဆောင်ရာ အူးခိုင်မ်မှ ကြမ်းပြင်ပြားပြားဝပ်လျက် အလာA Cat ပါ ၃ကြိမ် ပီပီသသအော်သော ဗွီဒီယိုကလစ်ဖိုင် ယူကျုတွင် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသူ တသန်းကျော်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
မေ၂၉ညနေ သဂျီးအူးခိုမ် တည့်ခင်းမည့် ရွာစုံညီပွဲသို့ နိုင်ငံဒေါ်အတိုင်ပင်ခံနှင့် သမတ အရေးကြီးကိစ်စ ရှိနေပြီး ရန်ကုန်ဝံကျီးချုပ်နှင့် မြို့တော်ဝံလည်း မအားလပ်သဖြင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် လျှာအိမ်မှူးအား ပြောင်းလဲ ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။
ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ခိုနီလေမားမားမှ သူ့အား လေစားစွာ မဆက်ဆံလျင် ဖဘတွင် ဘော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးချက် ထုတ်ပြန်သည်။
ရုရှားခရီး ပြန်လာသော သမတဦးထင်ကျော်အား အွမ်လိုင်းဆုံးမ ၉ခ) လော်ဘီမြ မှ လေဆိတ်တွင် သွားကြိုရာ သမတကြီးမှ သူ့အား မမြင်ဘဲ ကျော်သွားသဖြင့် နောက်တပွဲ မလွဲစေရန် ၆လာဘ်မ ဒေါက်ဖိနပ်တရံ ဈေးကြီးပေး ဝယ်ထားကြောင်း စကော့ဈေးမှ သိရသည်။
အန်အယ်လ်ဒီ အမာခံ ဒေါ်ချဲသွပ်နှင့် ဖက်ပြိုင်ပြောဆိုရန် လူတိုင်းစိုးရွံကြသဖြင့် တဖက်ပိတ်ချဲသွပ်ဘွဲ့ ပြိုင်ဖက်ကင်း ရရှိသွားသည်။
ဟင်းချက်ပို့စ်များစွာဖြင့် နာမည်ကြီးသူ လူမိုက်ခင်ဇော် ဟင်းရောင်းပွဲတွင် ဝက်သားနှင့်ကြက်သား မှားချက်သဖြင့် ၄င်းအား ဇတ်ပျက်သူအဖြင့် သူမွေးဖွားရာ တလှုပ်နိုင်ငံ ရှင်ကျန်းပြည်နယ် ဝှီဂါလူမျိုးစုအသိုင်းအဝန်းမှ ကြေငြာသည်။
တလုပ်ကူမြူ နစ်သူလျှို စွပ်စွဲခံရသူ မြစ်ဆုံရေကာတာလော်ဘီ ကြေးမုံဂျီးက ၎င်း မော်စီတုံးဓါတ်ပုံအား အလေးပြု ခြင်း မဟုတ်ဘဲ တသောင်းတန်ပိုက်ဆံ ဓါတ်ပုံရှေ့တွေ့သဖြင့် ကုန်းကောက်မိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြေရှင်းသည်။
ရွာသူ သာဂူးမှ သားလေးတဦး မွေးဖွားသန့်စင်ရာ သူ့လင် မျောက်ဘိုရီးမှ ဝမ်းသာလုံးစို့ပြီး အမြှောက်၂၁ချက် ပစ်ဖေါက်ဂုဏ်ပြုကြောင်း ဝမ်းသာဖွယ် သိရသော်လည်း ရွာတရွာ ကုန်သွားကြောင်း လေ့လာအကဲခတ်များမှ ထောက်ပြသည်။
Thint Aye Yeik says: .ကြံကြီးစည်ရာ သတင်းတွေ
ဂျစ်စူ says: ကျောကျော ကျီးကျီး အွီးကျောင် နောက်ဒယ်
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟီးဟီးဟီး
(၁၅) ကျပ် ဝင်ယူသွားတီ
ကထူးဆန်း says: ဟုတ်တယ် log in ၀င်ပြီးမှတော့ ၁၅ ကျပ် ယူဦးမှ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: Tourism ခေတ်ကောင်းတယ်ပြောရင် ရယ်ချင်နေတာ…
စမီးမယ်.. ခုန်ပြေးထွက်ချင်နေတာပါပဲ အူးလေးရယ်… ဒါမယ့် တစ်ခြားဘာမှလည်း မလုပ်တတ်ပုစ်လေ..
လုံမလေးမွန်မွန် says: ပျံဖျက်ပေးဘာ.. ဟိုဘက်နဲ့ မှားတွားဒါ
Tawwin Pan says: ဟိဟိ…မမလည်း အဲလိုမှားပြီး မန့်ဘူးတယ်……….
pooch says: Mt.Everest တက်ဖို့ စပွန်ဆာ သိန်း ၇၀၀ ရရင် ရောက်အောင်တက်လို့ရတယ်။ သေတာရှင်တာ နောက်တပိုင်းပေါ့ ။
Sherpa ကောင်းရင် ထမ်းတောင်တင်တယ် သိလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: ဒီ ထက် နာမည်ကြီးအောင် ကြောင်ကောက်ကောက်ဟင်း ချက်ကျွေးအူးမှပါ။
CharTooLan says: ယွံလို့ ဘူးမှမစားဘူး :P
uncle gyi says: သတင်းတွေရဖို့အတော်ပင်ပမ်းမှာဥူးကြောင်
Yae Myae Tha Ninn says: မြန်မာသတ်ပုံ သဒ္ဒါကျမ်း ပြင်ဆင်ရေးသားရန် ဦးကြောင်ကြီးအား ကော်ရက်ရှင်ဌာနတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်သည်…
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ငါအခွံဆောင်ဒယ်ကွ..ခု အဆံပဲကျန်တော့တယ်
Wow says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: နီ က ဒီ မှာ သူများ တွေ ကို သတင်းလုပ်ရေးနေ။
နီ့အမျိုး တွေ ကိုလဲ ဟိုမှာ ရေးနေပြီဟဲ့။ ဖတ်ကြည့်ဦး။
လူထု ဘက်တော်သား ဆင်းရဲသားများဘက်မှ ခေါင်းဆောင်ကြီး ရဲဘော်တော်လှန်ကြောင် –
အဲလာကို ရေးတဲ့ “ဗြိတိသျှကိုကိုမောင်” ဆိုတာ နာ့ အမျိုးဝုတ်ဘူးနော်။ :D
Swal Taw Ywet says: ၁၅ ကျပ်ဆိုလည်း မနည်းဘူးပေဘဲ။
manawphyulay says: စုံတကာစေ့ ဦးကြောင်သတင်း
၁၅ ကျပ် လာထား…..